आज फेरि संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ? यस्तो छ संविधानमा व्यवस्था — onlinedabali.com
आज फेरि संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ? यस्तो छ संविधानमा व्यवस्था
काठमाडौँ । आज फेरि संसद विघनट गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार संविधानको मन्त्रिपरिषद् गठनको सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन नसकेमा त्यसलाई उपचार ७ मा व्यवस्था गरिएको छ, “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।” संविधानको यही धारामा टेकेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैछ ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने र नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपति विद्यदेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको केही समयपछि भण्डारीले साँझ ५ बजेको समय सीमा दिएर नयाँ सरकारको लागि दाबी गर्न समय दिएकी छन् ।
ओलीले बैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानअनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । ओलीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, ओलीले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति थाहा छ की आज साँझ ५ बजेसम्म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले विश्वासको मत पाउने आधार बन्दैन् । बहुमत पुर्याउने आधार पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्छन् । तर त्यो राष्ट्रपतिले विश्वास गर्ने आधार पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदको कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्याउने आधार पेश गर्न नसकेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, दाबी पेश गरी प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके पनि संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यो विकल्पमा गए ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्छ र नयाँ व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छन् । ओली त्यो विकल्पमा नगई आजै संसद विघटनको तयारीमा लागेको बताइएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको अवस्थामा ओली बाहेकको व्यक्तिले बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार पेश गर्न सक्ने छैनन् । सरकारको दाबी गरिरहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत पुर्याउन एमालेको नेपाल समूहका कम्तिमा पनि २५ सांसदले रानिजामा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अहिले तत्काल सम्भव छैन । नेपाल समूहसँग ओलीले वार्ता र छलफल अगाडि बढाएकोले अहिले नै सामुहिक राजिनामा नदिने नेपाल समूहका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै बताइरहेका छन् ।
संसदको अहिलेको अंक गणितलाई हेर्दा भोलि नै विश्वासको मत पाउने आधार पेश गर्न कुनै पनि दल वा सांसले पेश गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिले दाबी गरेकालाई बहुमत पुर्याउने आधार नमान्ने र नयाँ सरकार नबन्ने सम्भावना बढी छ । यदि नयाँ सरकार नबन्ने अवस्थामा आएमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि नयाँ सरकार नबन्ने अवस्थामा संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गर्ने देखिन्छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नयाँ कदमलाई असंवैधानिक भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसलाई कानुनीरुपमै चुनौती दिने त नदेएपनि कानुनविदहरुले यसलाई असंवैधानिक र गलत नियत भएको बताएका छन् । ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भएको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीले ३० दिन पूरा नहुँदै र राजिनामा नदिएरै मार्ग प्रशस्त गरेको सिफारिस गर्नु गैरकानुनी भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले बताएको छ । यो केबल विरोध मात्रै हुनेछ । तर, साँझ ५ बजेसम्म नयाँ सरकार बन्ने आधार वा विपक्षीले बहुमत पुर्याउन नसके संसद विघटन ुहुने राजनीतिक विश्लेषकहरुले तर्क गरेका छन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विश्वासको मत नपाउने र अर्को सदस्यले पनि बहुमत पुर्याउने आधार नभएकोले संसद विघटन नै अबको विकल्प हो । यो सरकार अब चुनावी सरकार हुन्छ । हिजो सर्वोच्च अदालतले नियुक्त बदर गरेका सातै मन्त्रीहरुले पनि निरन्तरता पाउनेछन् । संसद नै नरहने अवस्थमा सर्वोच्चको आदेशको अर्थ नहुने बताइएको छ ।
यस्तो मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।